Banaanbaxyada Soomaalida Sweden | Somaliska
Banaanbaxyo dhowr ah ayaa beryahaan ka dhacayay magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Sweden kuusoo looga soo horjeedo go'aamadii ay Sweden ku joojisay mideynta kharaabada Soomaalida. Banaanbaxyadii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay magaalooyinka Göteborg, Växjö, Trollhättan, Linköping iyo tuulooying kale. Isbuucaan ayaa ilaa 30 qof isugu soo bexeen magaalada ayadoo maalmaha soo socdana la qorshaynayo in banaan baxyo kale lagu qabto magaalada Göteborg. Banaanbaxyada ayaa muhiim u ah ka war haynta dhibaatada Bulshada ee saxaafada iyo Dowlada Sweden ayadoo laga yaabo in ay is bedel sameeyso dowlada Sweden. Wareysigeenii ugu dambeeyay ee aan la yeelanahay Laanta Socdaalka ayaan ka dheehanahay inay soo wadaan is bedel, qaasatan mid la xiriira caruurta iyo waalidka kala maqan.
Banaanbaxyada Soomaalida Sweden
Banaanbaxyo dhowr ah ayaa beryahaan ka dhacayay magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Sweden kuusoo looga soo horjeedo go’aamadii ay Sweden ku joojisay mideynta kharaabada Soomaalida.
Banaanbaxyadii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay magaalooyinka Göteborg, Växjö, Trollhättan, Linköping iyo tuulooying kale. Isbuucaan ayaa ilaa 30 qof isugu soo bexeen magaalada ayadoo maalmaha soo socdana la qorshaynayo in banaan baxyo kale lagu qabto magaalada Göteborg.
Banaanbaxyada ayaa muhiim u ah ka war haynta dhibaatada Bulshada ee saxaafada iyo Dowlada Sweden ayadoo laga yaabo in ay is bedel sameeyso dowlada Sweden.
Wareysigeenii ugu dambeeyay ee aan la yeelanahay Laanta Socdaalka ayaan ka dheehanahay inay soo wadaan is bedel, qaasatan mid la xiriira caruurta iyo waalidka kala maqan.
Daawo: Wiil Soomaali ah oo ku dhawaaday in uu ku hafado dabaasha